Mkpa HTTPS | ECommerce ozi ọma
Ihe ịrịba ama mbụ na-agwa anyị na saịtị anyị gara bụ ntụkwasị obi bụ mgbe ọ na-egosi na igodo nsoro mkpụrụedemede "HTTPS" n'ozuzu ya na a gbachiekwa green.
Nke a pụtara na ụfọdụ ndị na-echebe ibe anyị na-aga nche nchebe na-agbanwe peeji a ka ọ bụrụ ebe echekwara iji banye data nkeonwe. Saịtị niile a chọrọ ka ha jiri paswọọdụ ma ọ bụ ụdị data ọ bụla ọzọ nwee akara a.
1 Ma gịnị ka nke a pụtara?
1.1 Ibe intaneti niile na-amalite site na HTTP
Ma gịnị ka nke a pụtara?
niile Ibe intaneti na-amalite site na HTTP
Ihe ọ pụtara Protocol Nyefee Protocol (na Bekee "Hyper Text Transfer Protocol").
Usoro a bụ nke na-enye ohere ịnyefe data site na World Wide Web. Mgbe ị na-agbakwunye S, a na-etinye aka na Ntọala Ndabere Njikọ na-agbanwe usoro iwu iji tinye usoro nchekwa ugbu a site na ụzọ nzuzo. N'ụzọ dị otú a, a na-echebe ihu akwụkwọ nke anyị gara na ọgụ megide ọgụ sitere n'aka ndị ọzọ na-anwa izuru data nkeonwe anyị.
Ọ bụrụ na anyị nwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị nke anyị na-enye ụzọ ịkwụ ụgwọ ịntanetị Ọ dị mkpa na anyị na-enye ndị ahịa anyị ebe dị nchebe nke ha ga-atụkwasị obi na data ego ha. Inwe usoro iwu nche a ga - eme ka ụlọ ahịa anyị dịkwuo elu. Iji nweta ya, anyị nwere nhọrọ abụọ:
• Nweta Asambodo SSL: Enwere ọtụtụ nhọrọ ịntanetị iji nyochaa peeji anyị dịka saịtị echedoro. Imirikiti na-enye aka na usoro nzuzo na usoro nchọpụta nsogbu.
• Jiri usoro ịkwụ ụgwọ mpụga: Ngwaọrụ dịka ntanetị ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị ma ọ bụ ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ na-etinyerịrị asambodo ndị a n'oge nrụnye. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere nkwado nke ụlọ ọrụ ndị a, na-enwe ike itinye uche na ụlọ ahịa anyị.
Ihe ọ bụla nhọrọ anyị họọrọ, anyị ga-eburu n’uche na ihe kachasị mkpa bụ ịnye ndị ahịa anyị ezigbo ahụmịhe ịzụ ahịa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Nche » Mkpa HTTPS
Nzọụkwụ 7 iji ree na Facebook
4 Ntanetị mentkwụ Onlinegwọ Online